लालना लिभरपुलमा बस्ने : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed लालना लिभरपुलमा बस्ने
लालना लिभरपुलमा बस्ने
लन्डन । इंग्लिस मिडफिल्डर एडाम लालनाले इंग्लिस क्लब लिभरपुलसँग छोटो समयका लागि सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । लालनाले यो सिजनको अन्त्यसम्मका लागि लिभरपुलसँग सम्झौता थपेका हुन् । लालनाको लिभरपुलसँगको सम्झौता ३० जुनसम्म रहेको थियो । तर, कोरोनाका कारण यो सिजनको खेल प्रभावित बनेपछि र प्रिमियर लिग जुलाईमा मात्र सकिने भएका कारण उनले थप एक महिना लिभरपुलमै बस्ने निधो गरेका हुन् ।
लिभरपुल झन्डै ३० वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधिनजिक रहेको छ । लिभरपुललाई च्याम्पियन बन्न केवल दुई जितको खाँचो छ । लिभरपुलले दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीलाई २५ अंकले पछि पारेको छ । उनी पनि लिभरपुल च्याम्पियन बन्दाको हिस्सेदार बन्नेछन् । लालनाले लिभरपुलमा ६ सिजन बिताइसकेका छन् । स्थगित प्रिमियर लिग १७ जुनदेखि सुरु हँुदै छ । लिभरपुलले २२ जुनमा मर्सिसाइड क्लब एभर्टनसँग खेल्दै स्थगित सिजनको सुरुवात गर्नेछ । ३२ वर्षे लालनाले यो सिजन लिभरपुलका लागि २२ खेल खेलेका छन् ।
प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले सिजनको अन्त्यसम्म लालनालाई चाहेको बताएका कारण उनले बाँकी रहेका सबै ९ खेलमा मौका पाउने सम्भावना रहेको छ । लालनालाई अनुबन्ध गर्नका लागि प्रिमियर लिग क्लब आर्सनल, बर्नमाउथ र बर्नलीले चासो देखाइरहेका छन् । लालना २०१४ मा प्रिमियर लिग क्लब साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुल आएका थिए ।
सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका । विश्वका धनी व्यक्ति बिल गेट्स र उहाँकी पत्नी मेलिन्डा गेट्सले सम्बन्ध विच्छेद् गर्नुभएको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो परोपकारी कोष,...
सिकाइको लक्ष्य विद्यार्थी टिकाउ
नाराका रूपमा ‘सबैका लागि शिक्षा’आएको पनि दशकौं भइसक्यो । विद्यालय बाहिरका बच्चालाई विद्यालय झिकाउन सरकारले अनेकांै प्रयास गरे पनि आजसम्म विद्यालय उमेरका सबै बच्चामा...
यथाशीघ्र छिटो वार्ता समिति गठन होस् : भूपू गोर्खा सैनिक
काठमाडौँ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएको निवृत्तीभरण र क्षतिपूर्तिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र छिटो वार्ता टोली गठन...
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । पार्टी...
यमनका मन्त्रीहरु चढेको विमानमा आक्रमण २२ जनाको मृत्यु
Exclusive Kumar Raut - December 31, 2020 0
कायारो । यमनको एडन सहरस्थित विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । हालै गठन...
Breaking News Kumar Raut - March 5, 2020 0
विदेश Prem Shyangtan - February 12, 2020 0
जावलाखेल र शेर्पा विजयी
काठमाडौं । प्रभु जावलाखेल युथ क्लब र यति हिमालयन शेर्पा क्लब कतार एयरवेज शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा विजयी भएका छन् । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा जावलाखेलले एनआईबीएल फ्रेन्ड्स क्लबलाई तथा शेर्पाले च्यासल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै सफलता हात पारेका...
कार्यकर्ता खोज्दै गाउँ–गाउँमा नेता, टोल टोलमा भेला
राजनीति Sushila Bishwokarma - January 8, 2021 0
तुलसीपुर । पार्टी एकतापछि सुतेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ दुई समूहमा विभाजनपछि दाङमा जागेको छ । पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म निष्कृय जस्तै बनेको...
कांग्रेसले भन्यो, अध्यादेश फिर्ता तत्काल संसद्
राजनीति Dhruba Lamsal - December 17, 2020 0
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘हठात रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बिनाशर्त फिर्ता गरेर तत्काल संसद् बैठक बोलाउन’ माग गरेको छ । कांग्रेस...
गच्छदारलाई भ्रष्टचार मुद्दा लाग्दा प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । ललिता निवास...
Breaking News Roshan Shrestha - February 18, 2020 0
भक्तपुर । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट सरकारले फर्काएका नेपालीलाई राखिएको खरीपाटीस्थित क्वारेन्टाइन क्षेत्रको आसपासका बासिन्दाका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै जिल्ला...
जंगलमा युवती बलात्कार गर्ने पक्राउ
प्रदेश Dhruba Lamsal - August 23, 2020 0
तुलसीपुर । बलात्कारको आरोपमा पश्चिम दाङमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा शान्तिनगर गाउँपालिका – ३ भलानेटी निबासी २३ बर्षका हर्के बहादुर...
प्रशान्त वली - May 8, 2021